ဆောင်းလူ ● တောခြောက်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းလူ ● တောခြောက်ခြင်း
(မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၆
အရိုးခံနဲ့ ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ….
အရုိုင်းခံနဲ့ ပြဇာတ်ဆန်ဆန် ….
ခဏ … ခဏ
တွန်း … တွန်း …လွှတ်ရတယ် …
သဘောထားနေကြလား မသိ ….
မှောင်တ၀က် လင်းတ၀က် …
ခဏ … ခဏ တောခြောက်ခံရတော့
နှလုံးခုန် ရပ်တော့မယ် ….
ဆောင်းလူ (၁၁၊ ၈၊ ၂၀၀၇)